तीन वर्षअघि आजकै दिन प्रचण्डले भनेका थिए- एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन – MySansar
तीन वर्षअघि आजकै दिन प्रचण्डले भनेका थिए- एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन
Posted on February 28, 2018 by Salokya
फेसबुकको ‘अन दिस डे’ फिचर पनि निकै काम लाग्नेछ। कहिलेकाहीँ वर्तमानले बिर्साइसकेका कुराहरु यसले खोतल्छ। एमालेसित एक भइसक्यो ‘ता’ मात्र घोषणा बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले पार्टीको बारेमा आलोचना गरेको अहिले हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। तर तीन वर्षअघि आजकै दिन प्रचण्डले एउटा भाषण गरेका थिए खुलामञ्चमा। त्यसमा उनले एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन पो भनेका रहेछन्। भाषणको भिडियो हेर्दा कमेडी सिरियल हेर्दा नउठ्ने हाँसो उठ्यो।
हेर्नुस् भिडियो –
हुन पनि प्रचण्डले ठीकै भनेका हुन्। एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन भने पनि जनताले एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाइदिइहाल्यो। अब एमाले नामको पार्टी नहुने नै भयो नि। माओवादी मिसिएपछि पार्टीको नामै परिवर्तन हुने भइहाल्यो।
3 thoughts on “तीन वर्षअघि आजकै दिन प्रचण्डले भनेका थिए- एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन”
नेपालमा हामीले नाम सिट व्यक्तिको रुप नियत नीति बिचार नमिल्ने नमुनाहरु धेरैनै देख्दै आयको हो/ तर यसको (छविलाल अर्थात बदलिरहने रुप) भने नाम सिट यसको बदलिरहने रुप नीति र नियत ठ्याक्कै मिल्छ/ हुनत यति गर्न नसकेको भय यो आज जहा छ त्याहा हुन् सक्ने ब्यक्तिनै होईन/
जस्ता मान्छे त्यस्तै प्रवृति देखाएछ . आखिर त्यसैको सरण लम्पसार हुनै पर्यो विचार कसलाई पो भनौ !!!
क्यामरा ले प्रचण्ड को मुख देखाउन भन्दा त्यो “हो….” भनेर कराउने भेडा हरु को मुख मा फोकस गरे राम्रो हुनेथियो किनकि येस्तै भेडा हरु ले गर्दा ठग नेता तयार भै रहेका छन्